Dhismaha Masjidka Al-Nuur Gaalkacyo ka qaybqaado Alle dartii (Sawiro) – Radio Daljir
Dhismaha Masjidka Al-Nuur Gaalkacyo ka qaybqaado Alle dartii (Sawiro)
Maajo 20, 2018 11:57 g 0
Maadama lagu guddo jiro bishii khayrka badnayd ee Ramadaan dhamaan Muslimiinta Somaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadiisa waxaan ka codsanaynaa in ay nagala qayb qaatan dhismaha Masjidka Al-nuur oo hadda qabyo ah una baahan in shacabka somaliyeed ee wax haysta ay ka qaybqaatan Alle dartii.
Masjidkan ayaa ku yaala Duleedka Gaalkacyo, gaar ahaan meel kaam ah oo lagu magacaabo Waayo Arrag, halkaas oo ay ku suganyihiin qoysaas danyar ah, ma haystan dadkas meel ay ku cibaadaystaan oo ay salaada ku Tukadaan, waxaana Idaacada Daljir Soomaaliya u samaysay barnaamijyo lacag looga aruurinayo bulshada Soomaliyeed ee gudaha dalka iyo dibadaba ku sugan si masjidkas uu u noqdo mid ay ku cibadaystan dadkaas oo dagan meel magaaladda ka fog.
Ogoow waa sadaqatu Jaariya, waxaadna galaysa janadda haddii xoolahaga aad ku bixiso dhisida Guriga Alle, waana bil Ramadaan Ajar iyo xasanaad ayaad helaysa. Isku day waxaad awoodo in aad u soo dirto sadaqadada waa wax meel ku taal aduunyadana guryo ayaad kadhisatay, balse waa laga tagayaa oo akhiro isku day inaad Guri kadhisato.
La soo xiriir Guddi Culumo ah oo gacantana ku haya dhismaha Masjidka.
Injineerka Masjidka Alnuur, Sheekh Mahad Maxamed Nuur Tel +252907740621
Ama+2526574633 Guddoomiyaha Kaamka Waayo Arrag oo ah Kaamka Masjidka laga dhisayo, Farxaan Warsame Cali Tel +252907751658
Ama Wariye Maxamed LakiMan oo Gaalkacyo jooga Warbixintana qoray Tel+252907781253
Hoos ka daawo sawiradda Masjidka.
Warka Arooryo iyo Maxamed Lakiman, Daljir Gaalkacyo (dhegayso)